Lakandranon’i Pangalana : mampihemotra mpizahatany ny loto | NewsMada
Lakandranon’i Pangalana : mampihemotra mpizahatany ny loto
Manana lanja amin’ny toekarena, sosialy, ny fizahantany ny lakandranon’i Pangalana. Tsy misy ny fikojakojana azy ka miantraika any amin’ny fahasalamana ny lotony, potika ny zavamaitso sy ny zavamananaina ao aminy. Mahamenatra antsika eo imason’ny mpizahatany vahiny. Fanadihadiana.
Heverin’ny Malagasy sy ny mpizahatany vahiny fa tsara amin’ny lafiny rehetra izany fitsangantsanganana amin’ny lakandranon’i Pangalana izany, miainga eto Toamasina hatrany amin’ny tapany atsimo atsinanana (Mahanoro, Mananjary, Farafangana). Ahitana toeram-pitsangantsanganana maro toy ny Akanin’ny Nofy, ny Tapakala, ny any Ambila Lemaitso sy ny hafa. Eo koa ny anjara toerany amin’ny fampandrosoana, amin’ny fivezivezen’ny olona sy ny vokatra, mitondra fampandrosoana ho an’ny tanàna andalovany sy ny faritra ankapobeny. Mamelona ny mponina andalovany koa satria ataony rano fisotro sy ilaina amin’ny velon-tenany, toy ny jono, ohatra.
Tandindonin-doza ity lakandrano mirefy manodidina ny 700 km ity ankehitriny, satria tsy misy ny fikojakojana azy sady maloto fa tsy rano madio mangatsangatsaka toy ny taloha intsony. Nahatsiaro voafitaka ny vahiny mpizahatany, tsy araka ny hita any amin’ny dokambarotra any ivelany. Tsy nahafaly azy ireo ny mahita ny fako, toy ny tapa-kazo, ny volontsangana, ny fako indostrialy avy amin’ny ozinina eto Toamasina, toy ny menaka, ny gazoala, sns, sady manimba sy mamono ny zavamananaina anaty rano rehetra (zavamaniry, hazandrano, …).
Notsorin’ireo mpizahatany fa “hampihemotra ny mpizahatany vahiny hafa ny fahitany ireo rehetra ireo. Ny hafa mbola tsy nitsidika tety indray angamba no ho voafitaka fa tsy izahay intsony. Hay maloto be tahaka izao ny lakandrano hitondrana anay amin’ny lakana”, hoy ny teratany italianina iray. Nambarany koa fa maloto manomboka eo amin’ny port Fluvial hatrany amin’ny toeram-pitsangantsanganana ve ny lakandranon’i Pangalana? Toa tanàna tsy misy tompon’ andraikitra?”
Potika ny tontolo iainana
Eo koa ny loton’ny mponina manamorona ny lakandrano, hanaovan’izy ireo ny malotony.
Tandindonin-doza ny fahasalamam-bahoaka sy ny tontolo iainana. Raha ny fantatra, misy ny minisitera sy ny sampandraharaham-panjakana mahazo famatsiam-bola misahana ny fanaraha-maso ny fahadiovan’ny ranomamy sy ny ranomasina, saingy toa mitazam-potsiny. Ny zava-misy, mampiasa rano maloto ny mponina, hisakafoana, hisasana sy ny hafa. Vokany, feno teboteboka toy ny mivoaka mony ny hoditry ny ankizy, sady mihangeza mibontsina, mivalana sy mikohaka matetika. “Lavitra ny toeram-pitsaboana ka misy mihitsy ny ankizy maty”, hoy ny mponina sendra anay.
Mirefy manodidina ny 700 km ny lakandranon’i Pangalana, miainga eo Toamasina hatrany Farafangana. Tsy voajanahary fa natao tanana izy, teo ambany fiahian’ny jeneraly Galliéni, ny taona 1896 ary vita ny taona 1904. Manodidina ny 300 ny Malagasy noterena (nandevozina) nanao azy, ahafahan’ny mpanjanatany frantsay mamoaka ny vokatra (kafe, jirofo, lavanila, …) avy any amin’iny tapany atsinanana atsimon’ny Nosy, ny miondrana any ivelany.
Nikojakojana farany nanadiovana ity lakandrano ity ny taona 1980. Nifanaraka tamin’ny fanjakana maraokanina ny fitondrana, ankehitriny, ny taona 2016, hanarenana azy indray, saingy tsy nanomboka ny asa hatramin’izao.
Soutien à Ahmad: la Tunisie n’a pas encore dit oui 26/10/2020